Jery taratra… herinandro : politika tsy misy farany | NewsMada
Jery taratra… herinandro : politika tsy misy farany
Vao manomboka ny taona vaovao, tsy misy farany ny resaka politika: mampifanditra, mampifandroritra… Fositra amin’izany ny amin’ny fifidianana loholona. Na ny eo anivon’ny Ceni aza, miaiky ny fahamaroan’ny fahadisoana: biletà tokana misy marika manokana tsy araka ny lalàna, fitanana an-tsoratra misy hosoka niniana…
Mitaky ny hamerenana tanteraka ny fifidianana loholona ireo kandidà Malagasy miara-miainga, Tim, ny Marina, Mapar. Nisy ny faneriterena mpifidy vaventy, voahitsakitsaka ny fahaleovantenan’ny Ceni, ny tsiambaratelon’ny latsabato, ny demokrasia. Maro ireo mampiaka-peo toy izany, na mpifidy na kandidà.
Hanao diabe miainga eny Ambohijatovo hatreny amin’ny masoivoho frantsay, Ambatomena, ny Hetsika Madagasikara miaro ny Nosy malagasy, anio. Antony ny fitakiana ireo Nosy malagasy eo an-tanan’ny fitondrana frantsay. Nampitandrina ny Emmo/Reg Analamanga fa hatao izay tsy hampisy io diabe tsy nahazoana alalana io.
Tsy ho vita ho azy ny raharaha? Toy ny fanalana fako eto Antananarivo Renivohitra, tsy vita indray andro, iray volana… Tsy hita izay fiovana, na eo aza ny ezaka. Lasa fifanenjehan’ny saka sy voalavo hatrany ny fanalana mpivarotra amoron-dalana eo afovoan-tanàna. Rahoviana vao hilamina tanteraka sy maharitra amin’izay?
Vita ny lanonam-panjakana fifampiarahabana noho ny taona vaovao teny amin’ny lapan’Iavoloha. Toy ny mahazatra eo hatrany ny fanaovana tombana ny zava-bita, indrindra ny sosialim-bahoaka. Misy koa ny fanamby sy fampanantenana. Teo koa ny fampiakarana 7,5% ny karaman’ny mpiasam-panjakana.
Manjaka hatrany ny tsy fandriampahalemana eny anivon’ny vahoaka ifotony. Tsy hita be ihany ny amin’ny fakana an-keriny sy fanaovana takalon’aina an’i Arnaud, 15 taona, any Toamasina. Amin’izany rehetra izany, tsy fantatra intsony na ratsy na tsara fiandoha ny taona? Asa, izay hiafarany…